News Collection: को नायिकालाई को नायक सजिलो ?
को नायिकालाई को नायक सजिलो ?
कलाकार भैसकेपछि धेरै पात्रसँग अभिनय गनुपर्छ । कलाकारहरु, थुप्रै पात्रसँग विभीन्न भूमिकामा देखिन्छन् । कसैको प्रेमीका, कसैको श्रीमती, कसैको सासु ससुरा या कसैको प्रेमी । तर, धेरै कलाकारसँग काम गरेपनि सवै जना सबैका रोजाईका भने हुदैनन् । नेपाली सिनेमाका नायिकाहरुको नायकसँग काम गर्न सजिलो मान्छन् होला त, हामीले केही नायिकासँग यो प्रश्न राख्यौं ।
नायिका झरना थापाले थुप्रै नायकसग काम गरिसकेकी छिन् । पछिल्लो समय उनले नयाँ नायकहरुसँग पनि निरन्तर काम गरीरहेकी छिन् । तर, पनि झरनालाई काम गर्न सुमन सिंह निक्कै सजिलो लाग्दा रहेछन् ।
झरनाले भनिन्, अहिले उसको र मेरो ट्युनिक खुवै मिलेको छ । सुमनसँग निरन्तर थुप्रै सिनेमा खेलीसकेकी यि नायिकाले उसले आफुलाई वुझ्ने भएकाले पनि काम गर्न सजिलो लागेको वताईन् । ‘उ व्यक्तिगत रुपमा कहिले पनि ठूलो पल्टने र काममा अल्छि गर्ने खालको छैन, उसको यही वानी नै मलाई मनपर्छ । ‘ यसैले, पनि सुमनसँग काम गनर् सजिलो लाग्ने उनको भनाई छ ।
नायिका अरुणिमा लम्साललाई नायक निखील उप्रेती काम गर्न सजिलो लाग्दोरहेछ । उनले भनिन्, उसँग मैले धेरै सिनेमा गरेँ, जहाँ एकदमै रमाईलो भयो । उहाँले कहिले पनि हाईफाई देखाउनु भएन, निखीलको यही वानी मलाई मन पर्‍यो । गीतको छायांकन हुँदा पनि निखील जी आफै ड्रेस ल्याएर आउनुहुन्थ्यो, कहिले पनि ठूलो मान्छे हुनुभएन । उहासँग मेरो केमेस्टि्र सुहाएको जस्तो लाग्छ मलाई । नायिका अरुणिमा लम्साललाई अव नायक आर्यन सिग्देल र राजेश हमालसग काम गर्न मन लागेको छ । अरुणिमालाई आर्यनसँग दुईवटा सिनेमामा काम गरे पनि उसँको सहनायिका भएर काम गर्न मन लागेको छ रे । । यता, नायक राजेश हमालसँग काम गरेपनि प्राय हमाल अरुणिमाको काका, ससुरा, या यस्तै यस्तै भूमिकामा रहेका रहेछन् । अरुणिमालाई राजेश हमालसँग एकपटक काम गर्ने इच्छा छ ।
‘मलाई सवैजनासँग काम गर्न मन लागेको छ । जीवन, निखील, कर्मा, आर्यन सवै सजिलो लाग्छ मलाई । म धेरै नवोल्ने मान्छे, म हरेक कुरामा वोल्दिन सोही भएर, काम गर्दा सवै जना सजिलो लाग्छ मलाई ।’ उनले थपिन् ‘काम गर्दाको क्षणमा वाहेक अन्य समयमा म खासै नवोल्ने भएकाले पनि नायकहरुलाई मैले खासै मुल्यांकन गरेको छैन ।’
गरिमा पन्तले कुनै त्यस्तो विशेष नायक रहेको बताइनन् । गरिमा भन्छिन्,’सवै नायकसँग काम गर्न सजिलो लाग्छ मलाई । सवै जनासँग उत्तिकै मिल्छु यसैले पनि होला यो सजिलो र यो अप्ठ्यारो भन्ने मेरो नजरमा छैन ।’
नायिका वेनिशा हमालले आफुलाई नायक राजवल्लभ कोईराला र यसराजसँग काम गर्न सजिलो लागेको वताईन् । उनले भनिन्, राजवल्लभ निक्कै सिनीयर भएर पनि धेरै सहयोग गर्नुहुन्छ, उहाँको यो कामवाट म प्रभावीत भएँ । चलचित्र स्वरको छायांकन संम्झदै वेनिशाले भनिन्, ‘म घाईते भएर उकालो चढ्न नसक्दा मलाई राजदाईले वोकेर नै उकालो चढाईदिनु भएको थियो ।’ यता नायक यशराजसग आफुलाई काम गर्न सजिलो लाग्ने वेनिशाको भनाई छ । नायिका हमाललाई अव कलाकार अनुप वरालसँग काम गर्ने रहर छ ।
यसरी, नायिकाहरुलाई काम गर्न आ-आफ्नै रोजाई भएको पाईयो । कोही व्यक्तिलाई सवैजना सजिला र काम गर्न आनन्द आउने खालका हुन्छन् भन्ने पनि छैन । तर, पनि कलाकार भैसकेपछि, रोजाई कोही एक भएपनि सम्वन्ध भने सवैसँग राम्रो हुनु जरुरी छ ।